Womenmụ nwanyị Africa na - edebe ihe ochie - ntọala afrikhepri
Welcome Categorie Ụmụ nwanyị AFRICA
Nwanyị kachasị ike na akụkọ ntolite Kama
Edere Amanishakheto na mpempe akwụkwọ edo edo na omenala agha ogologo nke Nubia (Sudan). Mba a nke mụrụ Pharaonic Egypt ma zọpụta ya na mwakpo ndị mba ọzọ n'oge ...
Ọnọdụ ụmụ nwanyị ojii ojii n'Africa oge ochie
Site n’inyocha ya nke ọma, onyonyo na ọnọdụ nke ụmụ nwanyị ojii n’etiti mba Afrịka oge ochie n’okpuru mmụọ ọ bụla si mba ọzọ, anyị na-ahụ na ha ghọtara ka…
Ndi agha Afrika ndi agha na agha a na-acho ochichi
Nwanyị eze ndị eze Ijipt ndị eze nwanyị ndị nwanyị bụ Ahotep, na Arsinoe II & III, na ndị niile sitere na Royal House of Kush. Ha chịrị Ijipt ma nye ndị agha ha na ndị agha ụgbọ mmiri ha iwu n’oge ọchịchị Rom. Na nke a ...
Mgbe Mandela banyere n'ụlọ mkpọrọ, ọ bụ onye ntorobịa nke na-enwu ọkụ. Ma lelee nwoke ahụ si pụta. Maka ezinaụlọ m, aha Mandela bụ ibu dị na…
Nwa nwanyi Ivorian na-emepụta Yswara, ihe dị mma nke 100% tii Afrika
Swaady Martin-Leke, onye bụbu onye isi ọhụụ General Electric na ndịda Sahara, ewepụtara akara ngosi tii ya dị oke ọnụ, Yswara. Ogwuregwu mbụ na-emeghe na August 6 na Johannesburg. Naanị ...
Aminata Traoré nabatara mmemme French na Mali na Central Africa
Otu afọ mgbe mmalite nke Serval, onye edemede na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Aminata Traoré mere ihe maka "Nkeji 20" na mmemme France na Mali na Central African Republic. Aminata Traoré, onye bụbu onye ozi…
16 June 1881: ọnwụ nke onye nchụàjà vodou Marie Laveau
New Orleans (Louisiana) bụ otu n'ime ebe dị elu nke okpukpe Vodou na United States. Vodou ka e guzobere na New Orleans na mbido narị afọ nke XNUMX, ndị ohu butere…
South Africa na-aghọ nwanyi mbu Afrika ka o kpoo ụgbọelu
Onye ọchụnta ego South Africa Siza Mzimela ghọrọ nwanyị nwanyị mbụ nke Africa ịmalite ụgbọ elu site na okike nke Fly Blue Crane. Onye isi oche na onye isi oche nke South African Airways (SAA) kemgbe ...
Ka ọ dị ugbua na 2011, akwụkwọ akụkọ America Forbes, ọkachamara na akụkọ banyere ihe ịga nke ọma, nyefere otu nwanyị pụrụ iche, "onye ọchụnta ego kachasị nwee ọganihu n'Africa". Akụkọ banyere…
Queen Zingha nke Angola, na-eguzogide ọchịchị ndị Portuguese
Queen Zingha (Jingha) nke Angola gosipụtara akụkọ banyere nnwere onwe nke ụmụ nwanyị Africa tupu oge ha, tupu ọbịbịa nke ndị na-achị Portuguese na Africa ojii. Anna Zingha bụ eze nwanyị ikpeazụ ...
Lupita Nyong'o hoputara nwanyi kacha nma n'uwa site na magazin ama ama
Madame Figaro jụrụ ya, Lupita Nyong'o chetara na o juru ya anya mgbe ndị mmadụ gụpụtara ya dịka nwanyị kachasị mma n'ụwa site na akwụkwọ akụkọ ndị mmadụ n'afọ gara aga. Uzo nke Lupita Nyong'o ...
Ranavalona III: eze nwanyị ikpeazụ nke Madagascar
Amụrụ na November 22, 1861 na Amparibe (aha ochie nke isi obodo: Antananarivo) Princess Razafindrahety a maara nke ọma dịka Queen Ranavalona III bụ eze nwanyị ikpeazụ nke…
Etiopia na-ebute akpụkpọ akpụkpọ ụkwụ na-eji ígwè tiri ihe
SoleRebels bụ ụdị akpụkpọ ụkwụ emere na Etiopia. Ndị ọrụ nka Etiopia a tinyere ọrụ ha iji mepụta akpụkpọ ụkwụ mara mma na nke kachasị mma n'ụwa ...
Page 1 nke 5 1 2 ... 5 -esonụ